DEG DEG: Kulankii Madaxda Soomaalida ee Garoowe oo Natiijo la`aan kusoo dhamaaday, Yaase fashiliyey shirka? – Puntlandtimes
DEG DEG: Kulankii Madaxda Soomaalida ee Garoowe oo Natiijo la`aan kusoo dhamaaday, Yaase fashiliyey shirka?
May 11, 2019 W LAASCAANO
GAROOWE(P-TIMES)- Hoggaamiyaasha Siyaasadda Soomaaliya ayaa maalintii lixaad ku shirsan magaalada Garoowe, waxay ka wada hadlayaan mustaqbalka siyaasadeed ee dalka oo ay hareeyeen khilaafyo waa weyn, wararkii ugu dambeeyeyna waxay daaha ka rogayaan fashilka dhinacyadan.
Warar hadda soo gaaraya warsidaha Puntlandtimes.com waxay cadeynayaan in ay subaxnimada hore ee maanta in wafuuda dawladda Faderaalka ay ka dhoofi doonaan Garoowe, iyagoo ku sii jeeda magaalada Muqdisho.
Sidaas oo kale wafdiyada dawlad gobaleedyada ee safarada soo galay ayaa maanta dib u laabanaya, waxaana meeshii ugu xumeyd gaaray khilaafka dhinacyadan u dhaxeeya.
Saraakiil katirsan Xaafiisyada Madaxweynaha & Raysalwasaaraha Soomaaliya oo lagu wargaliyey safarkan ayaa sheegay in ay tani ka dhigan tahay fashil weyn oo wajahayso Xukuumadda Faderaalka ee Soomaaliya.
Kulankan ayaa laysku fahmi waayay gabi ahaanba qodobadii laga wada hadlayay oo uu bilowgii faham-darro ka bilowday Ajendaha oo ay dawladda Faderaalku diiday qodobadii horey loogu heshiiyey in laga wada hadlo.
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo martigaliyey shirkan ayaa lafilayaa in uuqabto shir Jaraa’id oo uu faahfaahin kaga bixinayo waxyaabihii laga wada hadlay.
Wararka ayaa sheegaya in ay Beesha Caalamku qabanqaabinayso kulan kale oo ay doonayso in ay dhinacyadan iskugu keento kahor bisha June ee nagu soo wajahan, xiligaas oo ay tahay in Soomaalidu la timaado qorshe mideysan.
Warbixino Iyo Xogo Shirka La Xariira Halkaan Ka Daawo
Somalia haddii ay hoggaamiye yaal lee dahay maxaad ugu wacaysaa somalia, doqon yahay doqontu dhashay?
Fermaajo iyo khayre… Wadanka MA iyagaa iska leh xagay isku ad adkaynaayaan…. Dhibaatadoo dhani waa iyaga… Waxay diidan yihiin in laga Wada hadlo wixii lagu heshiiyay labadii sano ee lasso dhaafay….. Waayo wixii beesha caalamku ugu deeqday Somalia waxay ku koobeen muqdisho iyo musuqmaasuq….
Waxay doonaayaan heshiish cusub oo ay shacbiga been ugu sheegaan kadibna ay ka baxxaan
waasidii aabe maareyn karin gurigiisa.Waxaa loo jeedaa in Farmaajo lahay awiid iyo aqoon hogaanineed. Awalna dadkoo isbedel raadinaayey baa fursad ka doonay
Kala carar & kala yaaaac, waa sidaan filaayay. meeshii ugu fiicnayd bay maraysaa.
Khiyaaligii iyo durbaankii la tumaaayay ” farmaajoow nooloow , waligaa ha jabin”
meesha way ka baxday.Kooxdii nabar & naxdin hada ayay miyirsan doonaan.
Nimanyahow dadkoo idil waa ku sirmay Farmaajo iyo kheyre waa nasiib dro waqti kadhumay Soomaali Markaad u kuur gasho qaabka uu hadlaayo siduu u socdo waad garankartaa inuu yahay nin Fantoccio ama Pupet ah Ilaa iyo hada waxuu garan la’yahay Maamulgoboladyada in ay hoos tagaan Federaalka oo shaqadoodana ay kala duwantahay
War loo shishiro meesha ma taalo Qofwalba shaqadiisa waa inuu qabsadaa Farmaajo waa madaxweyne waa inuu qorsheeyaa howlaha asagoo ukaashanaya Maamul goboleedka. Ayaguna inuusan ku xisaabtamin inay Goolka leeyihiin waa u shaqayaan keliyah.
Waxaa la wada haystaa waa Miisanaayida oo ku salaysan shaqada la qabanayo
taasoo ah MusharaadkaDawlada Federaalka inay bixiso